Win Oo, the Ideal Artist – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 22 December 2010 22 December 2010 Categories Recounts, Win Oo
10 thoughts on “Win Oo, the Ideal Artist”
၀င်းဦးရဲ့စာအုပ်မဖတ်ဘူးဘူး. ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်. လင့်များရှိရင် share ပေးပါအုံး
ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ စာအုပ်လိုက် မတွေ့မိသေးပါဘူး။ စာမြည်းအနေနဲ့ ဖတ်ချင်ရင်တော့ http://www.facebook.com/note.php?note_id=183002935050283 မှာ ဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ အမြည်းနဲ့တင် သူ ဘယ်လောက် စာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာကို ခံစားကြည့်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
မိန်းမလှ အမုန်း can be downloaded from:
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ အပင်ပန်းခံပြီး တင်ထားတဲ့သူကိုရော အခု လင့်(ခ်) ပေးလာသူကိုပါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်လှပါတယ်ခင်ဗျား။
2 January 2011 at 6:37 pm
Facebook မှာ Win Oo Fan Page ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ သူ့ဝတ္ထုတိုလေးတွေ၊ ရုပ်ရှင်လင့်(ခ်)လေးတွေ၊ သီချင်းလေးတွေ၊ ဓာတ်ပုံလေးတွေ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
http://www.facebook.com/pages/Win-Oo/154793814568862?ref=mf မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၀င်းဦးရဲ့စာအုပ်မဖတ်ဖူးဘူး. ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်. လင့်များရှိရင် share ပေးပါအုံး
There isagoogle’s cache ofapage containing Win Oo’s songs. Although the original page is dead now, the “mediafire” links in it are still working. (Pls excuse me if you already have these songs.)
(1) pls search the following text in google:
ဆွေးနွေးချက်: ၀င်းဦး သီချင်းများ
(2) in the topmost search result, pls click “cached” (besides the address of the link)
(3) pls look for the DOWNLOAD links (mediafire links).
But, I am not sure whether mediafire is blocked in Myanmar or not.
23 December 2010 at 4:57 pm
This one is for “online listening” of Win Oo’s 12 albums.
Some of them are the same as the ones that I mentioned in my previous post.
21 June 2012 at 3:15 pm
ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်။ ကျွန်မလည်း လူငယ်တယောက်ပါ ဦးဝင်းဦးရဲ့ အနုပညာကို အရမ်းလေးစားတယ်။ တန်ဖိုးလည်းထားတယ်။
Previous Previous post: စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၈)
Next Next post: စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၉)